Garsoorayaal da’yar oo siminaar loogu furay Muqdisho+ SAWIRRO – Gool FM
Garsoorayaal da’yar oo siminaar loogu furay Muqdisho+ SAWIRRO
jilacow May 3, 2017
(Muqdisho) 03 Maajo 2017Hotelka Saxafi ee Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay Siminaar heerkiisu sareeyo kaasoo sare loogu qaadayo tayada garsoorayaasha Soomaaliyeed.
Siminaarkaan ayaa waxaa bixinayay Calı Sacııd oo ah madaxa waxbarasshada xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ahna macallinka ka tirsan FIFA.
Cismaan Jaamac Diraac oo ah guddoomiyaha guddiga garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay tirada garsoorayaasha ee loo qabtay aqoon kororsigaan isagoo sheegay in ay ka qeyb qaadanayaan 36 garsoore oo ka kala yimid gobolada dalka, waxa uuna carabka ku dhuftay in Siminaarkaan uu yahay kii labaad ee ugu yimid xiriirka FIFA.
Macallinka aqoon kororsiga bixinayay ee Calı Sacııd ayaa sheegay in simaarka uu billaawday shalay uuna ku eg yahay lixda bishaan, waxa uuna u mahad celiyay xiriirka SFF oo waqti galiyay in ay isku keenaan garsoorayaal da’yar oo qaarkood ka yimid gobolada.
Ugu dambeyn guddoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Shiine ayaa u mahad celiyay macalimiinta waqtiga galinaya in ay soo saaraan garsoorayaal cusub, isagoo ugu dambeyn furay Siminaarkii ay ka qeyb qaadanyeen 36 garsoore.
SAWIR QAADE: Xuseen Hadaafoow
Juan Mata oo soo bandhigay Qoob ka ciyaar cusub (DAAWO)